राजेश हमाललाई खुल्ला पत्र | Filmy Bazar in Nepal
नृपेश उप्रेती,१८ साउन ।
राजेश जी म तपाइँको अभिनयको ठूलो फ्यान हैन किनकि तपाईलाई अभिनय गर्न आउदैन । तर म तपाइको व्यक्तित्व र बौदिकताको ठूलो प्रसंसक थिए । म भर्खर पत्रकारितामा लागेको थिए र पहिलो मोशन पिक्चर अवार्ड्मा तपाइँ मात्र यस्तो कलाकार हुनुहुन्थ्यो अङ्ग्रेजीमा भाषण गरेर नेपाली दर्शक र बिदेशी अतिथिका माझ आफ्नो स्टारडम स्थापित गर्न सफल हुनु भएको थियो । त्यस पछि मैले तपाईं जस्तो बौदिक कलाकारको कारण फिल्म उद्दोगलाइ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा धेरै पटक मिडियामा उजागर गरे तपाईंको अन्तरवार्ताहरु पनि प्रस्तुत गरे । अभिनय भन्दा पनि मिथुन चक्रवर्तीको नेपाली भर्शनको रुपमा तपाईंलाइ दर्शकहरुले यति रुचाएकी तपाईं इतिहासकै सबै भन्दा सफल र चर्चित नेपाली नायक बन्न सफल हुनु भयो ।
आज एउटा प्रायोजीत न्युजमा तपाईलाई देखे साह्रै दुख लाग्यो । राजेश हमालजी तपाईं पनि नराम्ररी फस्नु भएको रहेछ जस्तो लागेको छ । दिपक डोमको प्रोपोगाण्डामा तपाईं बिक्नु भयो जस्तो लागेको छ? हो दिपकको भन्दा डर लाग्दो छुवाछुतको समस्या हाम्रो समाजमा छ । यसको सिकार धेरै दिपकहरु हुनु परेको छ । यो अपराध हो यस्को अन्त्य हुनु पर्छ । तर जुन रुपमा तपाइले अतिरन्जित गर्नु भयो त्यस्को पनि छुट्टै रहस्य हुन सक्छ जस्तो लागेको छ ।
२५ बर्षको क्यरियरमा तपाइले छुवाछुत अनुभुत गर्नु भएन भनेर म मान्दिन र तपाईंले छुवाछूतको बिषयमा बनेको कति चलचित्रमा अभिनय पनि गर्नु भएको छ । यो बिषयमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई कहिले सुझेन । आज मुलुक धर्म निरपेक्ष वा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राज्य हुने भन्ने मुद्दामा अल्झिएको बेला अतिरन्जित ढङ्ले यो कुरा बाहिर ल्याउनु भयो यसलाई प्रायोजित हैन र तपाई पनि प्रयोग हुनु भएन भन्ने कुनै आधार छैन । यहाँ करोडौं खर्चेर धर्म निरपेक्षता लादिदैछ । अर्को अर्थमा भन्नू पर्दा इसाई करणलाइ कानुनिकरण गरिने प्रयास हुदैछ । लोभ, लालच प्रलोभनमा । नेता देखि सेलेब्रीटी र समाजमा प्रभाव भएका तपाईं जस्ता ब्यक्तित्वहरुलाइ आर्थिक मोहमा फसाएर यसको लागि क्यम्पेनिङ गरिदै छ । त्यसैले तपाइँ पनि त्यसैमा बिक्नु भयो भन्ने शंका उब्जिएको हो ।
हो उमेरको साथै नया शैलीका स्टारको आगमनले फिल्म उद्दोगमा तपाईंको प्रभाव शुन्य भएको छ । स्टारडमलाइ कायम राख्न नियमित आय आर्जन पनि चहियो । अब फिल्म बाट त्यो सम्भव छैन । समाजले आफ्नो फाइदाको लागि जन्माएको कुरितिलाइ हिन्दु धर्म सङ्ग जोडि अहिले यो धर्म बदनाम गरे राम्रो आय आर्जन हुने अवस्थामा तपाई कतै यतै तिर लागेको हो कि भन्ने भान भएको छ । अनि नेपाली हुनुमा लज्जित छु भनेर पनि भन्नू भएछ । अब के गर्नु हुन्छ? अरु कुनै देशको नागरिकता लिनु हुन्छ या यो देश छोड्नु हुन्छ? तपाईलाई राजेश हमाल बनाउने नेपाली नै हुन नेपाल नै हो ।
वास्तवमा एउटा घटनालाई लिएर यति ठूलो कुरा गर्दा तपाईंलाइ तपाईं बनाउने दर्शकहरुलाई कति आघात पुग्यो होला तपाई महशुश गर्नु भएको छ । हुन त तपाई समाजिक मुल्य मान्यता नमान्ने अलिकती कुसंस्कारी पनि हो । खोलाको किनारमा आपत्ती जनक अवस्थामा पक्राउ पर्दा भाग्य रेखाबाट तपाईंलाई निकालिएको थियो भने कामनाले तपाईंको नाङो तस्विर छापेको थियो, बुवाको मृत्युमा कपाल नकाटेकोले पनि तपाईं उनिहरुले टार्गेट गरेको र तपाईं प्रलोभनमा पर्नु भएको भन्ने बिश्वाश लागेको छ ।
म आशा गर्छु मेरो यो बिश्वाश गलत सबित होस । राजेशजी मलाइ लाग्छ । अब तपाईले लज्जाबोध भयो भन्दैमा यो कलन्क भोलि नै अन्त्य हुदैन । अनि सामजिक कुरिती र कुसस्कारलाई लिएर धर्म बिशेषको आलोचना गर्नु हुन्छ भने त्यो मुर्ख्याइँ हुन्छ । हो छुवाछुत र बर्णब्यबस्था हाम्रो समाजको कलन्क हो । त्यस्को अन्त्य गर्न आत्मालाई साक्षी राखेर भनौ हामी बाट के पहल भयो त? प्रायोजित न्युजलाई आधार बनाएर सामजिक सन्जालहरुमा कुर्लन सजिलो छ । तर तिनिहरु बाटै माखो मार्ने काम भएको छैन । यस्ता कुरितिको अन्त्य रातारात हुदैन । कम्तीमा पनि एउटा पुस्ता (जेनेरेसन) को बिशर्जन हुनु पर्छ । दुनिया यहा सम्म हिजोको आजै आइ पुगेको हैन ।
विभिन्न कालखन्डहरु पार गर्दै आएको हो । मेरि छोरीलाई केही दशक आगाडी सम्म गोरेहरुले कालाहरुलाई जनावरको श्रेणिमा राख्थे, पशुलाई जस्तो बाधेर राख्थे भन्दा “बाबा त्यस्तो नि हुन्छ र? म सङ्गै पढ्ने इमान्युल (काला जातिको बालक) म जस्तै हैन र भन्छे” । म छुवाछुत मान्दिन । तर मेरि ७५ बर्षिय आमामा छुवाछुतको धङ्गधङ्गी छ । म डाडा माथिकी जुन भैसक्नु भएकी मेरी आमाको मन पनि दुखाउन सक्दिन र उहाको अगाडी कथित छुवाछूत मानेको जस्तो पनि गर्छु । जबकी मेरो छोराछोरीलाई छुवाछुत जस्तो कुरा exist गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन दिएको छैन र दिन्न ।
हामी सबैले यति कुरा मात्र ब्यबहारमा लागू गर्न र अरुलाइ लागू गराउन सक्यौ भने केही बर्ष भित्र यो छुवाछूत अन्त्य हुन्छ । किनकी छुवाछुत मान्ने एउटा कट्टर पुस्ता लोप हुने चरणमा छ । हामी सबैले आफ्नो ठाउँ बाट पहल गरयौ भने भोलिका सन्ततिले छुवाछुत पनि exist गर्थ्यो र भनेर अचम्म मान्ने हुन सक्छ । मानिसमा चेतना जगाउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो । यतिकै कुर्ले, डलर पचाउने बाहेक कुनै काम हुदैन । र छुवाछुतलाई धर्म सङ्ग जोड्नेहरुलाई सोध्न चाह्न्छु कुन हिन्दु ग्रन्थमा छुवाछुतलाई बढवा दिएको छ? ससारमा कुनै धर्म नराम्रा छैनन । सबैले जीवन दर्शन, मानबियता, सेवा सहयोग र शान्तिनै सिकएका छन ।
आइ.एस. लाई इस्लाम र रुखको जरो जस्तो फैलिएर शान्ती फैलाइउदै दुनियाँ आफ्नो पकड्मा लिन खोजको आधारमा कृश्चियन धर्मलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । यिनिहरुको धर्मग्रन्थ पनि आफैमा महान छन् । त्यसैले कुरिती र कुसस्कारको बिरुद्द लडौ । हातमा हात मिलाएर काधमा काध मिलाएर । कुरिति र कुसंस्कारलाई जोडेर धर्मको आलोचना गर्नु रक्तपात निम्ताउनु हो । र पश्निमाहरुले हाम्रो देशमा प्रभाव जमाउन चाहेको पनि यहि हो ।
Previous: छुवाछुतका कारण अभिनेता राजेश हमाललाई नेपाली हुनुमा लज्जास्पद
Next: इटालीको भेनिस इन्टरनेश्नल फिल्म फेस्टिभलमा ‘कालो पोथी’ छनौट